बन्दैछन् भक्तपुरका साँस्कृतिक सम्पदा
प्रकाशित मिति: 2018-03-12
पुननिर्माण हुँदै गरेको भक्तपुर दरबार स्वायर क्षेत्रको मन्दिर तस्वीरः सबिना रुम्बा
भक्तपुर । भक्तपुरका ऐतिहासिक साँस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माणले गति लिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएका भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रका दरबार प्रवेश द्धार, हरिहर नारायण, शंखर नारायण, बद्री नारायण मन्दिर, सिद्ध पोखरीको पर्खाल र फसिदेग मन्दिरको पुननिर्माण सकिएको छ ।
केदारनाथ, बत्सला, सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर, कला संग्रहालयको मर्मतको काम अहिले भइरहेको भक्तपुर नगरपालिकाको सम्पदा विभागका प्रमुख रामगोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
२०७२ सालको भूकम्पमा भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका १ सय २१ सम्पदा तथा मठमन्दिमा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये ६९ सम्पदा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए । ५२ वटा सम्पदामा आशिंक रुपमा क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुननिर्माण सक्ने भनेपनि बुट्टेदार ढुंगा तथा इट्टाको अभाव, आवश्यक काठ नपाईदा समयमै काम नसकिने देखिएको छ । सम्पदा पुननिर्माणमा दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव रहेको विभागका प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पुरातत्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिकाले कार्य विभाजन गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रको मन्दिर तथा ऐतिहासिक महत्वका संरचना पुननिर्माणको काम गरिरहेको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदा पुननिर्माणका लागि २९ करोड ३२ लाख लाग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । सम्पदाहरु पहिले कै स्वरुपमा, आकर्षक र बलियो बनाउने गरी काम भइरहेको विभागका प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
चामल बोक्दै हुम्ली महिला !
नागरिकको बुझाइः स्थानीय तह आएपछि काम गर्न सजिलो
मन्त्रीले सचिव कुटेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको समिति के गर्दैछ ?
स्वास्थ्य केन्द्र आयो तर औषधि आएन (अडियोसहित)
सीडीओलाई आफ्नै मातहत राख्ने सङ्घीय सरकारको जुक्ति
सीपमूलक तालिम पाएपछि आफ्नै व्यवसायमा युवा
छाउ हटाउन आफैबाट पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
दुबै खुट्टा नचल्ने शोभाको संघर्ष र सफलता